Iiseti zempahla ekhuselayo → iimpahla ezisebenzayo • I-P & M yokwaleka kweekhompyuter
Impahla yokukhusela ziyilelwe ukuqinisekisa ukhuseleko ngexesha lomsebenzi. Ziyimfuneko yemigaqo yempilo nokhuseleko. Ukusetyenziswa kwezinto ukwenza ingqokelela enjalo kufuna amalaphu akhethekileyo ngenxa yeemeko ezithile zokusetyenziswa.
Kwivenkile yethu, njengenxalenye yempahla ekhuselayo, unokuthenga iimaskhi ezikhuselayo, izigcina-ntloko, izambatho ezingqina ubungqina be-acid (kubantu abasebenza ngemichiza eyomeleleyo) kunye neengubo zokutsala iinkuni (ibhulukwe kunye nemaski).
Ndiyabulela ekusetyenzisweni kwezinto ezikumgangatho ophezulu, impahla ekhuselayo iyaxhathisa ekonakaleni, iziphumo eziyingozi zezinto ezinxulumene nomsebenzi owenziweyo, kwaye ikwanyamezela kakhulu ukucoca okanye ukuhlamba rhoqo. Iikiti zokukhusela zenziwe ngezinto ezilungiselelwe ukusetyenziswa kwazo, konke ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi. Ububanzi obubanzi bokuhlengahlengisa iimpahla buqinisekisa ukuba buya kufaneleka kwiintlobo ezininzi zamanani nakubantu abaphakamileyo obahlukileyo.
Impahla yokukhusela ukukhusela kunye nokuthuthuzela umsebenzi
Iimpahla ezenziwe ngelaphu le-PVC (i-asidi-yokukhusela) ziyamelana neekhemikhali. Yenzelwe ukuba isetyenziswe kwiindawo apho kukho umngcipheko wokudibana nezinto ezinjengeeasidi, iziseko kunye neehydroxides. Impahla yokukhusela ebonelelwe kwivenkile yethu ihlangabezana neemfuno ze-EN13688, i-EN14605 imigangatho. Kwimpahla ekhuselayo, sikwabonelela ngeempahla zekhonkco (iibhlukhwe) zetyathanga. Ingubo ebandakanya ibhatyi kunye nebhulukhwe ineenkcukacha ezininzi zokugcina imigangatho ephezulu yezokhuseleko. Iseti iyacetyiswa kubagawuli beenkuni okanye abaqhubi bee-chainsaw-bahlangabezana neemfuno ze-EN13688 kunye ne-EN381-5 (iklasi 2 (ibhlukhwe).
Uluhlu lwethu luquka iimpahla zangoku zokuzikhusela ezenziwe ngumqhaphu onzima kunye nomxube wezinto zokwenziwa. Ukucaciswa komsebenzi kwimisebenzi emininzi kunye neemeko zentsebenzo yabo kwakuthetha ukuba iimodeli esizibonisayo zithathela ingqalelo ezi mfuno, zilungelelanisa iiparameter kwiimfuno ezizodwa zomsebenzi okhethiweyo.
Iingubo zokhuselo zengcali zenziwe ngezinto ezininzi eziququzelela ukusetyenziswa kwazo. Ukuthuthuzela, baxhotyiswe ngeepokotho eziphangaleleyo, iiziphu zokulungiselela ukunxiba ibhulukhwe, kunye nemitya eqinisekisiweyo yokukhusela ngokuchasene nemichiza, imichiza kunye nemozulu.
Ngaphambi kokuba uthenge kuthi Ivenkile Sicebisa ukuba unxibelelane nathi ukuze uqinisekise ubukho beemveliso kunye nomenzi wethu. Abasebenzi bethu banako ukunika ingcebiso malunga nokhetho lweempahla.
iimpahla zokukhusela i-betaIifilimu zokukhusela iimpahlaiimpahla ezilahlayo ezikhuselayoiimpahla zokhuselo zonyangoizikhuselo ezikhuselayo zeempahlaiimpahla zokhuseloimpahla yokukhuselaimpahla yokukhusela abantwanaiimpahla ezikhuselayo zombaneimpahla yokukhusela oogqirhaimpahla ekhuselayo ye weldersiimpahla zokhuselo koogqirha bezilwanyanabarn impahla ekhuselayoimpahla ekhuselayo yokutshizaI-husqvarna yokunxiba okhuselayoIzinto ezingafunekiyo zokukhuselaiimpahla zokukhusela kwi-kielceiimpahla zokhuselo zonyangoimpahla yokukhusela ingqakaqhaImpahla yokukhusela iPPEiimpahla zokhuselo zeweldazikhusele iimpahla zokhuseloiimpahla zokucima umliloIngcaciso yokhuselo lweSebe lezoMliloiimpahla zomsebenzi okhuselayoiingxowa zokukhusela iimpahla
5 / 5 ( 15 iivoti )